Igumbi elipholileyo kwiBlankenese - I-Airbnb
Igumbi elipholileyo kwiBlankenese
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguChristine
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-15 Okt.
Indlu yethu ehlaziyiweyo yezitena ezibomvu ukusukela ngo-1936 ikwindawo yokuhlala ethe cwaka kwidolophu yase-Elbe. I-S-Bahn ikumgama wemizuzu eyi-10. Igumbi leendwendwe likumgangatho ophantsi, lineemitha ezizikwemitha ezingama-20 kunye negumbi lokuhlambela labucala. Indlu yangasese ikwindawo yokungena endlwini.
Indlu yethu izole kakhulu kwaye inegadi ejonge emazantsi enethafa ekunokwabelwana ngazo. Igumbi leendwendwe linebhedi ephindwe kabini kwaye lifaneleka kakuhle abantu ababini. Kukwakho nendawo yomntwana kumatrasi owahlukileyo.
I-Nienstedten ifana nelali encinci enevenkile yamachiza, ivenkile yeencwadi, iindawo zokubhaka kunye nevenkile emnandi ye-ayisikrimu. Umbindi wesixeko umgama wemizuzu engama-20 kuphela kwaye unokufikelelwa ngokulula ngoqhagamshelo oluthe ngqo lwe-S-Bahn. Ngenxa yeepaki ezininzi apha kuluhlaza kakhulu kwaye i-Elbe isoloko ifanelekile ukuhamba. Le ndawo ikwalungele ukukhwela ibhayisekile nokubaleka. Ngethamsanqa, unokumangaliswa kwiinqanawa ezinkulu zenqanawa apho iinqanawa kunye neenqanawa ezihamba ngenqanawa zabelana ngomlambo.
Ndiya kuba kwindawo ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ndiya kukuvuyela ukuphendula naziphi na iingcebiso onokuthi ube nazo malunga nokuhlala kwakho kunye nayo nayiphi na eminye imibuzo.
Inombolo yomthetho: 22-0010558-19